Tag: akara ngosi twitter | Martech Zone
Kpido: twitter hashtag
Anyị edeela banyere mkpa ọ dị iji hashtags mgbe ị na-eji Twitter, mana ọ bụ usoro agbasapụkwara site na nyiwe ndị ọzọ. Karịsịa, Youtube, Instagram na Google+ agbakwunyere nkwado… na Facebook n'akụkụ akuku! N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, hashtags bụ ụzọ dị mfe iji gosipụta mkpụrụokwu, ahịrịokwu ma ọ bụ isiokwu dị n’ime ederede gị. Wonder na-echekarị onye jiri hashtag mbụ? Can nwere ike ịkele Chris Messina na 2007 na Twitter! kedu ka ị mere
Mba, nke a abụghị otu n'ime mkpasu iwe ahụ Nweta ndị ọzọ na-agbachitere iji mepụta ihe ị na-eso na Twitter na ndị na-eso ụzọ adịghị mkpa. Nke a bụ otu ị ga - esi bulie olu gị na Twitter nke mere na ndị na - egeghị gị ntị na - ahụ gị tweets. A na-akpọ azịza hashtag. Enwere ọtụtụ mmadụ na mmemme na-achọ Twitter ugbu a maka ozi oge na ihe omume na-achọ hashtags. Hashtag bụ paụnd